5.ဒီ VTSB စီးရီးဆန်စက်မှာတာရှည်ခံရော်ဘာကြိတ်စက်ရှိသည်
6.၎င်းသည် VTSB စီးရီးပေါင်းဆန်စက်စက်ဖြစ်သည်
VTSB ဆန်စက်သည်ဆွဲဆောင်မှုရှိသည်, ကျစ်လစ်သိပ်သည်းသောဖွဲ့စည်းပုံအပြင်ရိုးရှင်းပြီးလုံခြုံစိတ်ချရသောလည်ပတ်မှု. ပေါင်းစပ်ထားသောဆန်စက်သည်အဓိကအားဖြင့်အခြားသောအလားတူစက်များ၏ချို့ယွင်းချက်များကိုဖြေရှင်းခဲ့သည်, ထိုကဲ့သို့သောကြမ်းဖွဲအဖြစ်, အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲအတွင်းလေထုညစ်ညမ်းမှု, ဤ SB ဆန်စက်စက်သည်ဖွဲစုပ်စက်များတပ်ဆင်ထားသည်, စပါးကြိတ်စက်သည်စက်များကိုဆန်မှအပအလိုအလျောက်ခွဲထုတ်နိုင်ပြီးစပါးနှင့်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နိုင်သည် ဆန်နှံ,ဆန်စစ်စက် ပြီးပြည့်စုံသော set up ရန် ဆန်စက်စက်ရုံ. ထို့နောက်စပါးကိုတစ်ချိန်တည်းပြီးအောင်စပါးကိုပြုပြင်ပါ။ ထို့ကြောင့်အပြီးသတ်ထုတ်လုပ်မှုတွင်အောက်ပါလက္ခဏာများရှိသည်: ဆန်ဖြူအများကြီး,အနိမ့်သောအပူချိန်နှင့်အတူစင်ကြယ်သောချောဆန်,ခွံနည်းနည်း ,ချော၊, မြင့်မားသော output ကို, စွမ်းအင်နိမ့်စားသုံးမှု, ထို့အပြင်အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲကိုသန့်ရှင်းစွာထားရန်လွယ်ကူသည်။ စပါးပေါင်းစပ်စက်ဆန်စက်သည်စပါးဆန်ထုတ်လုပ်မှုအတွက်စံပြဆန်စက်ဖြစ်သည်။ ဤပေါင်းစပ်ဆန်စက်ကိုလျှပ်စစ်မော်တာနှင့်ဒီဇယ်အင်ဂျင်ဖြင့်မောင်းနှင်နိုင်သည်.
ဤပေါင်းစပ်ထားသောဆန်စက်သည်ထူးခြားသောအစာကျွေးနည်းကိုအသုံးပြုခဲ့သည် ,အဓိကကြိတ်ခွဲအစိတ်အပိုင်းများကိုရော်ဘာ roller.it ဖြင့်ပြုလုပ်ထားပြီးစက်၏စွမ်းဆောင်ရည်ကိုတိုးတက်စေသည်.
SB ပေါင်းဆန်စက်ကိုအညိုရောင်စပါးမျိုးစုံဖြင့်အသုံးပြုနိုင်သည်။ စပါးနှင့်ဆန်လုံးပါ ၀ င်နိုင်သည်။ .
ကျွန်ုပ်တို့၏ပေါင်းစပ်ထားသောဆန်စက်စက်၏ဤဒေါင်လိုက်အမျိုးအစားသည်လုပ်ငန်းလည်ပတ်ရာတွင်နိမ့်ကျသောအပူချိန်ကိုထိန်းသိမ်းနိုင်သည်။ ဤစက်အားစီးဆင်းမှု design.it ဖြင့်လျှော့ချနိုင်သည်
တစ်ခုတည်းသောသံကြိတ်စက်ပေါင်းဆန်ဆန်စက်နှင့်နှိုင်းယှဉ်သည်,ရော်ဘာ roller ကိုယ်ထည်ပြီးနောက်စပါး,သံမဏိစက်များအတွက်အဆင်ပြေစေလိမ့်မည်.
SB ဆန်စက်သည်ဆန်ကိုနို့တိုက်ကျွေးသည့်တွင်းထဲသို့ထည့်သည်,ထို့နောက်ဆန်ဖြူနှင့်အဖျင်းများသည်ထွက်ပေါက်အမျိုးမျိုးမှထွက်သွားကြလိမ့်မည်။ စပါးကရာဘာကြိတ်စက်ကို ဖြတ်၍ သံ roller သို့သွားသည် ,ဆန်နှင့်ဖွဲသီးခြားစီထွက်ခဲ့ပါတယ်.
ရိုးရှင်းသောဖွဲ့စည်းပုံနှင့်အတူပေါင်းစပ်ဆန်စက်စက် ,အသုံးပြုသူအပိုပစ္စည်းကိုအစားထိုးရန်အဘို့အကပိုမိုလွယ်ကူသည် .
ဒီဇယ်ဆန်စက်ကိုဒီဇယ်ဖြင့်မောင်းနှင်နိုင်သည် ,ဓာတ်ဆီအင်ဂျင် ,လျှပ်စစ်မလိုအပ်သောနေရာများတွင်သင့်တော်သောလျှပ်စစ်မော်တာ .diesel အင်ဂျင်နှင့်ဓာတ်ဆီအင်ဂျင်ဆန်စက်စက်.
ပထမအားဖြင့်စပါးကိုပေါင်းစပ်ဆန်စက်စက်၏နို့တိုက်ထဲသို့ထည့်လိုက်သည်, သူတို့ကတုန်ခါမှုဆန်ခါအားဖြင့်အမျိုးမျိုးမှကွဲကွာနေကြသည်. ထို့နောက်သန့်ရှင်းသောစပါးများသည်ပစ္စည်းများကိုဖယ်ရှားရန်အတွက် Hopper ၏ flash board မှတဆင့်သံလိုက်စက်ဖြင့်ဖြတ်သွားသည်, ထို့နောက်၎င်းတို့အားအစာကျွေးနေသောစက်ဖြင့်သယ်ဆောင်ရန်ရော်ဘာကြိတ်စက်နှစ်ခုသို့သယ်ဆောင်သည်. SB ပေါင်းဆန်စက်စက်၏ flux adapter သည်အစာမြန်နှုန်းကိုညှိပေးသည်. လျင်မြန်သော roller နှင့်နှေးသော roller သည် ၃.၆ Mps ကွာခြားမှုနှင့်ပြောင်းပြန်လှည့်သည်, နှင့်သူတို့၏လှည့် - မြန်နှုန်းအချိုးအစားသည် 1:1.35. အခွံခွာနှုန်းသည်ပိုမိုများပြားသည် 95%, နှစ်ခု roller အကြားရှင်းလင်းရေးရှင်းလင်းရေးညှိနှိုင်းမှုအားဖြင့်ချိန်ညှိသည်. husking ပြီးနောက်, အဆိုပါဖွဲမှုတ်စက်စက်ထဲကအရောအနှောအတွက်ဖွဲမှုတ်. စပါးထွက်ရှိသည့်စပါးသည်ပေါင်းစက်ဆန်စက်မှစပါးထွက်ပေါက်မှတဆင့်စီးဆင်းသည်, နှင့်ဆန်အညိုရောင်ကြိတ်ဆုံနှင့်ကြိတ်ရန်ကြိတ်ခွဲခန်းသို့ဝင်သည်, နောက်ဆုံးအနေဖြင့်ဆန်စပါးအထွက်အဖြစ်ဆန်ထွက်ပေါက်မှတဆင့်ထွက်သွားသည်.
VTSB ဆန်စက်စက်ကြိတ်ခွဲနေစဉ်, ဖိအားမြင့်မှုတ်တံသည်ကြိတ်ခွဲခန်းကိုအေးစေပြီးအချောသပ်ပြီးကြည်လင်ပြတ်သားစေရန်သေချာစေရန်အတွက်အဓိက ၀ င်ရိုး၏အန္တာရာယ်သို့လေကိုစဉ်ဆက်မပြတ်မှုတ်သည်။, လျော့နည်းကျိုးပဲ့, နှင့်ဖွဲချောချောမွေ့မွေ့ထုတ်ပါစေ. ဆန်ထွက်ပေါက်အနီးရှိဆွဲငင်အားသုံးကိရိယာနှင့်ဆန်၏အဖြူရောင်ကိုချိန်ညှိ, အမှုန့်များထွက်ပေါ်လာသည်ကိုဒီဇယ်ဆန်စက်မှဆန့်ဂျက်ဆန်ဆန်အပေါက်မှတစ်ဆင့်ထုတ်ပစ်သည်.
ပေါင်းစပ်ဆန်စက်စက်၏နည်းပညာဆိုင်ရာ parameters တွေကို
မော်ဒယ် VTSB5 VTSB10 VTSB30
(ကီလိုဂရမ် / နာရီ) 500~ 600 700~ 900 1100~ 1500